Magaca iyo Sawirada Ninkii ka Dambeeyay Weerarkii Qaniisyada (Sawirada) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Magaca iyo Sawirada Ninkii ka Dambeeyay Weerarkii Qaniisyada (Sawirada)
13th June 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Nin hubeesan ayaa weerar wax a uu ku qaaday Goob lagu caweeyo oo kutaala magaalada Orlando ee dalka Mareykanka, waxaana weerarkan ka dhashay qasaaro aad u badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
War kasoo baxay Booliiska ayaa lagu sheegay in toogashada Orlando ka dhacday uu ka dambeeyay nin Muslim ah oo lagu magacaabo Cumar Sadiiqi Matiin oo haysta dhalashada Maraykanka, hase ahaatee asal ahaan ka soo jeeda dalka Afghanistan .
Ninkan ayaa weerarka uu ku qaaday goobta lagu caweenayay waxa uu ku dilay dad gaaray 50-qof , waxa uu sidoo kale ku dhaawacay dad ka badan 50-qof oo kale, waxaa sidoo kale ninkan laga soo bad baadiyay dad badan uu goobtaasi ku qafaashay.
Ciidamada booliiska oo gaaray halka uu weerarku ka dhacay ayaa ugu dambeyn toogasho waxa ay ku dileen Cumar Sadiiqi Matiin, waxaana ciidamada ay bad baadiyeen dad badan uu ninkan ku heestay goobta uu weeraray.
somalia:Suspected U.S. drone crashes in Al Shabaab-held Somali town